Uludwe lweeNqaku malunga noJulius Caesar
Izixhobo zokufunda ngakumbi malunga nomlawuli owaziwayo
UJulius Caesar unomlinganiselo wokuba ungomnye wabantu abaluleke kakhulu kwimbali yehlabathi, kwaye uludwe lwamacandelo alandelayo lubonisa ukuba kutheni. Bakhombisa indlela i-republic yeRoma eyayikhathala ngayo (kwaye yayisuka ku - Gracchi ). Emva koko uKesare waqala ukunyusa iYurophu, wabangela imfazwe yombango, waza wakhuthaza ukubulawa kwakhe (ngabantu abangenalo ubulumko bukaKhesare okanye icebo lokugcina). UCesare waqhekeza intambo ebunyiweyo, ukudala umbane wamanzi owawuzaliswa yi-first of the kings of the world-power of Rome.
Ubomi bukaKesari (Julayi 12/13, 100 BC-Matshi 15, 44 BC)
CC Flickr Umsebenzisi euthman. UJulius Caesar
Ukuthi uJulius Caesar wayekhokelela ubomi obungavamile. Ngethuba eli malunga no-40, uKesare wayengekho nje umhlolokazi kwaye waqhawula umtshato kodwa wakhonza njengorhuluneli (i-propraetor) ye-Spain eqhubekayo. Wayebanjwe ngamaphiko waza wanconywa njengomkhosi ngokubamba imikhosi. Ukuqalisa, wayekhonza njenge-consul kwaye wakhethwa i-pontifex maximus, udumo oluhlala ixesha elide lugcinwe ukuphela komsebenzi womntu.
Eli nqaku linika iinkcukacha kuzo zonke iimpumelelo eziphambili zikaKhesare. Ibonisa ixesha elifanelekileyo lobomi bakhe kunye nemigaqo eqhelekileyo yezobuchwephesha ukuba azi malunga nemikhosi yakhe yempi kunye nenkonzo yezopolitiko. Kaninzi "
Impumelelo kaYulius Caesar
Idenariyo yesilivere ethwele intloko kaYulius Caesar njengoPontifex Maximus, yabetha i-44-45 BCG iFerrero, Abafazi baseKesari, eNew York, ngo-1911. Ngokunyanisekileyo kwe-Wikimedia.
UJulius Caesar wayeyinkokeli enkulu yempi kunye nomlawuli. Wadibanisa ndawonye ababini abathandanayo, uCrassus noPompey, ukuba benze i-triumvirate yokuqala. Wakha ikhalenda yeRoma engavumelananga, yawayisa amaGauls kwaye wayengumRoma wokuqala ukuba ahlasele iBrithani. Kwaye akunjalo.
UKesare wenza imisebenzi ye-Senate yamaRoma, waqala imfazwe yombutho, wabhala malunga nayo kunye neempi zaseGallic kwiLatin, ekhangayo. Kaninzi "
Amaphuzu okuguqula uJulius Caesar
UDariyo okhishwe nguJulius Caesar. CC Flickr Umsebenzisi we-portableantiquitie s 'photostream
UJulius Caesar uya kuhlala eyaziwa ngempumelelo yakhe ebomini kunye nokubulawa kwakhe okungazikhunjulwayo ngo-Matshi. Ubomi bukaKesare bugcwele umdlalo kunye nokuzonwabisa. Ekupheleni kobomi bakhe, ngelo xesha wayethathe iRoma, kwakukho isiganeko sokugqibela sokubulala umhlaba, ukubulawa. Ukufa kwakhe kubonakala kwiinkonzo zentlalo yoluntu, ezifana ne-Twitter, kwanamhlanje. Eli nqaku malunga neemeko eziphambili ebomini bakhe kubonisa ukuba kutheni enesidingo ngokude emva kokufa kwakhe.
Abantu Ubomi bukaJulius Caesar
Cleopatra Umfanekiso. Clipart.com
Njengomlawuli waseRoma, uKesare wadibanisa nabo bonke abadlali abakhulu kwi-republic. Oku kuquka umalume wakhe uMarius, uSictus, uSicla, uCicero, uCatiline, Clodius, Pompey, kunye noCrassus. Kwaye, ke, ubudlelwane bakhe obuqhelekileyo kunye noCleopatra sele kubhalwe malunga nokudala. Ukuze uzonwabe, funda iincwadi ezijongene nomcimbi kaMeyi-Disemba phakathi kweCleopatra noJulius Caesar. Kaninzi "
Ndihlala ndiKesare. I-Grabber yamanani
U-Julius Caesar uye waba yinto ephikisana nayo ngaphambi kokuba abulawe. Indlalifa, wabhenela abantu kwaye wayesongela ukhuseleko lwaseRoma. Funda okulungileyo (amaninzi namhlanje) angabonakaliyo ebomini ebomini, ukufa, umkhosi wempi kunye nezopolitiko zikaJulius Caesar. Kaninzi "
UJulius Caesar wabhala ama-commentary kwiimfazwe alwa eGaul phakathi kwe-58 no-52 BC, kwiincwadi ezisixhenxe, enye ngonyaka ngamnye. Olu chungechunge lweengxelo zeemfazwe zonyaka lubhekiswa ngamagama ahlukeneyo kodwa lubizwa ngokuba nguDe bello Gallico ngesiLatini, okanye i-Gallic Wars ngesiNgesi. Kukho nencwadi yesibhozo. Kaninzi "
Funda iinguqulelo zesiNgesi zikaJulius Caesar owaziwayo ucaphula kwiimfazwe zikaKesare zikaGalili kunye ne-bios kaKhesare nguPlutarch noSuetonius.
Funda inguqulelo yesizinda soburhulumente beSuetonius 'gossipy biography yeyokuqala kuma-12 eKesare. Kukho ukuguqulelwa kwesizinda sommandla wePlutarch's biography kaJulius Caesar.
UTrjan wayengumlawuli waseRoma uMarcus Ulpius Traianus
Uluhlu lweGap? (Kutheni Kubizwa ngokuba yiyo?)
Ngubani owasungula ukuprinta kwe-3D?
Umehluko phakathi kwazo zonke ezikulungele kwaye sele zikhona